Famatsiam-bola Fec: mitaky fanatsarana ny fari-piainan’ny mponina ny FMI | NewsMada
Famatsiam-bola Fec: mitaky fanatsarana ny fari-piainan’ny mponina ny FMI
Nandalo teto amintsika ny iraky ny FMI nanao tomban’ezaka sy fitsirihana fahefatra momba ny fanatanterahana nataon’ny fitondram-panjakana avy amin’ny famatsiam-bola Fec (Facilité élargie de crédit). Nanao tatitra tao amin’ny minisiteran’ny Vola sy ny tetibola izy ireo, omaly. Araka izany tatitra izany, heverina hahatratra 7 % ny fitombon’ny harinkarena faobe amin’ity taona 2018 ity. Io ny fisondrotana ambony indrindra tato anatin’ny 10 taona farany, araka ny fanambaran’ny FMI.
Tsara, amin’ny ankapobeny, ny fanatanterahana ireo fandaharanasa nahazoana famatsiam-bola avy amin’ny Fec. Vokatra azo tamin’izany ny fitombon’ny vola niditra amin’ny fanjakana, nahazoan’ny fanjakana nampiasa vola eo amin’ny sehatra sosialy sy fanamboarana fotodrafitrasa. Nohamafisin’ny FMI ny ady amin’ny kolikoly hisorohana ny fahaverezam-bola mihoa-pampana.
Mbola olana goavana ny vidin-tsolika
“Na eo aza ny fisondrotry ny vidin-tsolika, tsara ny varotra ivelany vitan’i Madagasikara, noho ny fitombon’ny vokatra lavanila sy ny harena an-kibon’ny naondrana any ivelany”, hoy ny lehiben’ny iraka, i Marshall Mills. Mbola olana goavana anefa io vidin-tsolika io. Efa nisy rahateo ny fifanarahana eo amin’ny governemanta sy ireo mpivarotra solika, nojerena izay marimaritra iraisana hanalefahana ny fiantraikan’ny tsy maintsy hampiharana ny tena vidin-tsolika. Manodidina ny 200 miliara Ar izao ny trosan’ireo mpaninjara solika ireo amin’ny fanjakana.
Na mahita aza ny FMI fa latsaka 7 % ny fisondrotry ny vidim-piainana ankehitriny raha oharina ny taona 2017, mitaky fanatsarana ny fari-piainan’ny mponina ry zareo, izay midika ho fanatsarana ny lafiny sosialy sy ny vidim-piainana ho takatry ny maro anisa. “Mitaky fampisondrotana ny harinkarena faobe maharitra sy miantraika amin’ny rehetra izany”, hoy ihany i Marshall Mills. Nosoritan’ny FMI ihany koa ny fandaniam-bola tsy mamokatra fa mba hampiasa vola ho an’ny famokarana, toy ny any amin’ny fambolena sy ny fiompiana ny fanjakana. Tokony hanao ezaka hatrany koa ny Jirama, raha ny fanamarihan’ny FMI.